Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: ady seza ao Tsimbazaza | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: ady seza ao Tsimbazaza
Zatra hitsin-dàlana andro ririnina ka maika tsy faingana dia be famaritra toy ny rambon’omby, tamin’ny fananganana kômisiona mihoatra noho izay tokony ho izy. Ny kômisiona isanisany dia natao hifandanja amin’ny minisitera tsirairay, noho izany dia voatery hampitoviana ny isany. Sodokan’ny fisantarana fe-potoana vaovao, na ireo gidro antitra efa za-draharaha na ny sovaly vahiny vao miaka-tsehatra eo Tsimbazaza, ka samy seriny avokoa nisafidy kômisiona itsofohana araka ny teo aloha.
Tafajoro ny governemanta araka ilay fihenana ny isan’ny ministera ho fanajana ny sori-dàlana vaovao. Eo vao nikoropaka ireo solombavambahoaka tamin’ny fanakambanana ny kômisiona izay azo nampivadiana noho ny adidy sahaniny. Na teo ihany aza ny fitrangan’ny savorovoro madinidinika tetsy sy teroa, tsy nampikorontana firy fa vetivety dia nilamina. Nisy ihany anefa ny olana nitranga noho ny fihenan’ny isan’ny filoha arakaraka izay fihenan’ny isan’ny kômisiona izay, ary tsy olana mora vahana fa tena taolana eo amin’ny kômisiona miadidy ny Fanajarina ny Tany. Tafiditra ao anatin’ny fifaninana ho filohan’io Kômisiona io ingahy Raholdina, izay efa filoha talohan’ny fanakambanana io Kômisiona io tamin’ny iray hafa.
Lasa mifono resaka pôlitika ny fifaninanana, no sady raharaha manahirana noho ny fisehoan’ny lafina fikorontanana an-tokantrano. Tsy miafina intsony ny tsy fifankatiavan’ny minisitra Andrianainarivelo sy ny depiote Raholdina, fifankahalana mihitsy aza no azo ilazana ny fifandraisan’ny roa tonta. Efa lasa lavitra ka tonga hatrany amin’ny fanendrikendrehana sy fiampangana momba ny fanodinkodinana fananan-tany. Ny mpampandotso koa moa eo andaniny, tsy tara amin’ny fanasiana sira sy fanitarana, ka mampandraotra ny zava-misy amin’ny filazana izany fisehoana izany ho adin’Ikotofetsy sy Imahaka. Tamin’ny fotoan’ny Tetezamita moa dia nomen’ny minisitra Andrianainarivelo birao tao amin’ny minisitera, ialokalofana ingahy Raholdina. Rehefa nitombo angamba ny amboakely tinaiza dia lasa mampiseho vangy mitady hanaikitra.
Noho ny fihariharin’ilay disadisa ampahibemaso tsy hita hafenina fa mibaribary toy ny vay an-kandrina, dia tsy maintsy ahitana fomba fandravonana haingana ny rodobe maro an’isa mpanohana ny filoha. Na sarotra aza ny ahatongavana amin’ny fampihavanana dia ny fampangiginana ny ady sisa no azo ezahana, ahafahana manakana ny fiitatry ny fery.